News - Log Mashiinka miinshaaro badan
Miinshaar farabadan oo badan ayaa loo tixgeliyaa inuu leeyahay faa'iidooyinka quudinta siman, ka shaqeynta ganaaxa, ma jiro daab daab gubanaya, waxtarka sare, alaab yar oo la isticmaalo, amniga iyo ilaalinta deegaanka.Tani waa tiknoolajiyad wax ku ool ah oo sax ah oo saxa ah oo keydinaysa keydinta dhirta. cilmi baarista iyo qalabka cilmi baarista iyo horumarinta, sanado badan ka dib shaqaale farsamo gudaha ah oo heegan u ah cilmi baarista iyo horumarinta, waa guul farsamo heer sare ah oo leh xuquuq madaxbanaan oo aqooneed.
Hal miinshaar oo loo yaqaan 'multi-chip' ayaa beddeli kara afar miinshaar oo dhaqameed dhaqameed ah. Qalabku wuxuu qaataa qaab-dhismeed cusub iyo tiknoolojiyad cusub oo dhowr ah, oo ka kooban farsamadiisa ayaa gaareysa heer sare oo caalami ah. Qalabku wuxuu jari karaa alwaaxyada, qoryaha badhkood iyo alwaax laba jibbaaran dhexroor 20cm ah.Said waa wax ku ool ah, sax sare, maxaa yeelay waxay noqon kartaa miinshaar galay tiro ka mid ah qeexitaannada hore ee guddiga, heer sare ah otomaatiga. dhumucda daab 1.5 1.7 mm, oo leh daab daab guud marka la barbar dhigo 2.5 3.0 mm dhumucdiis, miinshaar miinshaar waddo ka badan mashiinka kale ee miinshaaro ayaa la dhimay by 46%, on lid ku ah, heerka wax waa sida sare sida 76% ilaa 80%, alwaax heerka isticmaalka ee qiyaastii 27% ka sarreeya kan noocyada kale ee mashiinka wax lagu jeexo, iyo habka jarista ayaa xasilloon, saxanka miisaanka ee dhumucda lebiska, dusha sare, jilicsanaanta saxda ah ee saxda ah, sidoo kale waxay yareyn kartaa kala badh geedi socodka dhameystirka qoryaha.
Isla mar ahaantaana, maxaa yeelay wadarta awoodda matoorku way hooseysaa, isticmaalka awoodda aaladda waxaa hoos u dhacaya 25% ilaa 40%.
Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo miinshaarrada looxa-jeexjeexyada leh: jiifka iyo toosan.
Waxay kuxirantahay astaanta aad rabto inaad socodsiiso - haddii ay tahay dhexda si aad uqaado laba jibbaaran, hubi inaad dooratid miinshaar geedo baddan oo baalal badan leh, maxaa yeelay qoriga miinshaarrada lagu qoro alwaaxa toosan, sidaa darteed dhib malahan cabirka dhexroorka log waa la qaadan karaa.Haddii ay tahay in la furo dhammaan qoraalada, waxaad dooran kartaa qoryaha tooska ah ee loo yaqaan 'multi-slice', maxaa yeelay daabku wuxuu jaray qoryaha si siman, waa la jari karaa.
1. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qorista dhaadheer ee qoryaha dhexroorka yar. Marka loo eego cabbirka hore, taarikada kala duwan ayaa lagu goyn karaa hal quudin.
2. Marka loo barbardhigo miinshaarka kooxda, waxtarka mashiinku wuu sarreeyaa, saxsanaanta waa sare, hawlgalku waa sahlan yahay oo wuu ku habboon yahay, shuruudaha farsamo ee hawlwadeennaduna ma sarreeyaan, taas oo ka dhigaysa cilladaha miinshaarista saxsanaanteeda. hooseeya, waxtarka ayaa hooseeya, shuruudaha farsamo ee hawlgalka ayaa sarreeya.
3. Baalalka miinshaarku wuxuu ku qalabeysan yahay qalab qaboojiye ah, oo aan sahlaneyn in la gubo miinshaarta oo uu dheereeyo nolosha adeegga miinshaarrada.
4. Saf laba jibaaran quudinta silsilad fiiqan, dayactir fudud iyo dhaqaale.
5. Dhamaadka sii-deynta ayaa leh aaladda hagista quudinta firfircoon, taas oo aan sahlaneyn in la soo dhejiyo baalasha miraha oo hagaajiso habsami u socodka quudinta.
6. Xadiidka jihada hore iyo gadaal iyo tareenka hagaha quudinta ee sanduuqa dunmiiqa waxaa saliid lagu siiyaa mashiinka saliida lagu shubo, kaas oo dheereeya nolosha adeegga tareenka hagaha.
1. Nidaaminta iyo hubinta silsiladda quudinta, quudinta silsiladda mootada iyo mootada hagista ee ku dhex jirta qoryaha loo yaqaan 'multi-chip saw' si joogto ah.
2. Si joogto ah u hubi in dhererka suunka iyo cidhiidhiga mootada weyn ay dhexdhexaad tahay, koobka saliidda ee sanduuqa waa in si joogto ah loogu buuxiyaa saliid, iyo in tuubada saliidda ay jirtay si haboon dekedaha.
3. Daboolka suufka, daabka daabkiisa iyo daabkiisa ku yaal miinshaar fara badan ayaa ah in si joogto ah loo nadiifiyo (3 ~ 5 maalmood) saliidda naaftada, laguna nadiifiyo maro nadiif ah. Waa inaanay jirin qoraxdu inta lagu jiro rakibidda, ka dibna lagu nadiifiyo maro.
4. Xudunta dunmiiqa waa in loo isticmaalaa in lagu shubo godka biyaha hal mar maalintii markii la badalayo qoriga loo yaqaan 'multi multi-chip saw', ama lagu afuufo qoriga hawada meesha ugu yar ee laga soo baxo si wasakhda loo afuufo loona hubiyo in marinku siman yahay.
5. Si joogto ah u hubi in lowska dunmiiqa ee ku dhex yaal mashiinka miinshaarrada badan lagu jaro uu dabacsan yahay iyo in kale.
Golaha Wasiirada Qalabka Alwaaxa, Qorshayaasha Golaha Wasiiradda Qalabka Shaqaynta, Qalabka Mashiinka Cnc, Qaybaha Cnc, Qaybaha router-ka CNC, Qalabka Robin Wood,